မွနျမာ အိန်ဒိယနယျစပျကနေ ခိုးဝငျလာတဲ့ ကသညျးလူမြိုး ၅ ဦးကို မုံရှာ-ခငျြးတှငျးတံတားမှာ ဖမျးမိ – Voice of Myanmar
မုံရှာ သွဂုတျ ၁၃. ၂၀၂၀
မွနျမာ-အိန်ဒိယနယျစပျ ခိုးဝငျပေါကျကနေ ခိုးဝငျလာတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား ကသညျးလူမြိုး အမြိုးသား လေးယောကျကို မုံရှာ ခငျြးတှငျးတံတား တကျဂိတျမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ မုံရှာမူးယဈတပျဖှဲ့စုက ဖမျးဆီးလိုကျကွောငျး မုံရှာမွို့မရဲစခနျးကနေ သိရပါတယျ။
‘” လဝကဦးစီးမှုး ဦးဆနျးမငျအောငျက တရားလိုပွုလုပျ တိုငျတနျးထားပါတယျ ခိုးဝငျ ကသညျးလေးယောကျနဲ့ ကားသမားတဈယောကျကိုတော့ မုံရှာပွညျသူ့ဆေးရုံးကွီးက ဂါတျဝပျမှာ ကှာရနျတီး ၂၁ ရကျဝငျနပေါတယျ “လို့ မုံရှာမွို့မရဲစခနျးမှုး ဒု-ရဲမှူး ဝငျးနိုငျကပွောပါတယျ။
အထောကျအထားမဲ့ ခိုးဝငျလာတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား ကသညျးလူမြိုးလေးယောကျဟာ ကလေးမွို့က ဦးကြျောထှနျနိုငျ မောငျးလာတဲ့ ကားပျေါကနေ ဖမျးဆီးရမိတာဖွဈပါတယျ။
ဖမျးဆီးရမိတဲ့ အိန်ဒိယ နိုငျငံသား ကသညျးလူမြိုး လေးဦးကတော့ MrKoireng ကှာကတဲရပျ အငျဖာမွို့ Mr Abi ကကျခငျြးမွို့ Mr Banner ဝငျဇာမိုငျးရပျ အငျဖာမွို့ Mr Angan မာလုံရပျ အငျဖာမွို့ နထေိုငျသူတှဖွေဈပွီး သူတို့ကို လဝက အကျဥပဒေ ပုဒျမ ၁၃(၁) နဲ့ ယာဉျမောငျးဖွဈသူကို လဝက အကျဥပဒေ ၁၃ (၅) အရ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #နယျစကျခိုးဝငျ #ကသညျးလူမြိုးဖမျးမိ
မြန်မာ အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကသည်းလူမျိုး ၅ ဦးကို မုံရွာ-ချင်းတွင်းတံတားမှာ ဖမ်းမိ
မုံရွာ သြဂုတ် ၁၃. ၂၀၂၀
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ခိုးဝင်ပေါက်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုး အမျိုးသား လေးယောက်ကို မုံရွာ ချင်းတွင်းတံတား တက်ဂိတ်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ မုံရွာမူးယစ်တပ်ဖွဲ့စုက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း မုံရွာမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ်။
‘” လဝကဦးစီးမှုး ဦးဆန်းမင်အောင်က တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းထားပါတယ် ခိုးဝင် ကသည်းလေးယောက်နဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်ကိုတော့ မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးက ဂါတ်ဝပ်မှာ ကွာရန်တီး ၂၁ ရက်ဝင်နေပါတယ် “လို့ မုံရွာမြို့မရဲစခန်းမှုး ဒု-ရဲမှူး ဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။
အထောက်အထားမဲ့ ခိုးဝင်လာတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုးလေးယောက်ဟာ ကလေးမြို့က ဦးကျော်ထွန်နိုင် မောင်းလာတဲ့ ကားပေါ်ကနေ ဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုး လေးဦးကတော့ MrKoireng ကွာကတဲရပ် အင်ဖာမြို့ Mr Abi ကက်ချင်းမြို့ Mr Banner ဝင်ဇာမိုင်းရပ် အင်ဖာမြို့ Mr Angan မာလုံရပ် အင်ဖာမြို့ နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ကို လဝက အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃(၁) နဲ့ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူကို လဝက အက်ဥပဒေ ၁၃ (၅) အရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #နယ်စက်ခိုးဝင် #ကသည်းလူမျိုးဖမ်းမိ